जीवनशैली - साप्ताहिक
 अरूले तानेको देख्दा आफूलाई पनि तलतल लाग्यो भने आफैंले आफूलाई ‘केही मिनेट ढिलो गर्छु’ भन्नुहोस् । यस्तो चलाखीले पनि चुरोटबाट बिस्तारै टाढा बनाउँछ ।पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , माघ ३, २०७४
अहिले अमेरिकामा अत्यधिक चिसो छ । मौसमविद्हरूका अनुसार ग्रेसन हिउँ आँधीले न्यू हेम्सायर राज्यको तापक्रमलाई माइनस ६९ डिग्री सेल्सियससम्म पुर्‍याएको छ । यो चिसोपन अमेरिकामा अहिलेसम्म रेकर्ड भएको तापक्रममा सर्वाधिक कम छ । पुरा पढ्नुहोस्
लामो आरामपछि अहिले कार्यालयको जिम्मेवारी पुन: सम्हाल्न थालेकी सन्ध्याले लिंग परिवर्तनपछि आफूले बिल्कुलै नौलो अनुभूति गरेको बताइन् । ‘मेरो सपना थियो, शारीरिक रूपमा पनि महिला पहिचान बनाउने,’ सन्ध्याले भनिन्— अहिले त्यो पूरा भएको छ । पुरा पढ्नुहोस्
साप्ताहिक संवाददाता , जेष्ठ २, २०७४
संजोग कोइराला : तिमी आज पनि ढिलै आयो हैन ?वर्षा राउत : म जहिले पनि ढिला हुन्छु रे ? हेर न भनेको ।पुरा पढ्नुहोस्
कृष्ण भट्टराई, फाल्गुन ९, २०७३
म्युजिक भिडियोमा अभिनय गर्दै विद्यार्थी राजनीतिबाट मनोरञ्जनको क्षेत्रमा आएका चलचित्रकर्मी हुन् सुनिल रावल । चलचित्रमा अभिनेता बन्ने उद्देश्यले यो क्षेत्रमा आएका रावलले केही चलचित्रमा अभिनय पनि गरे । पुरा पढ्नुहोस्
कृष्ण भट्टराई, माघ २७, २०७३
सम्झिन्छु...जति सम्झिन्छु त्यति देखाउनचाहिँ सक्दिनँ । तिमी र म फोनमा जति कुराकानी गर्छौं नि, त्यतिले नै आफूलाई सम्हाल्छु ।पुरा पढ्नुहोस्
किशोर नेपाल, मंसिर २७, २०७३
नाटक विधामा सिर्जना बलियो पर्सन्यालिटी मान्छिन् दिया मास्केलाई । दियामा निर्देशन र अभिनय दुवैको राम्रो ज्ञान छ ।पुरा पढ्नुहोस्
किशोर नेपाल, मंसिर २, २०७३
फेसन डिजाइनिङ पनि पेसा हुन्छ र ? हाम्रो समाजमा अझै यस्ता प्रश्नहरू सोधिन्छन् । यो त वर्तमान समयको सबैभन्दा आकर्षक पेसा हो । ग्ल्यामर हो । फेसन डिजाइनर प्रबल गुरुङ वर्तमान समयका हस्ती हुन् । पुरा पढ्नुहोस्
किशोर नेपाल, कार्तिक ७, २०७३
रेखालाई आफ्ना सबै गीत उत्तिकै प्रिय लाग्छन् । उनलाई थाहा छ जन्मिएका सन्तान सबै राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्दैनन् । यद्यपि राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री बन्न नसकेका सन्तान अयोग्य हुँदैनन् ।पुरा पढ्नुहोस्
किशोर नेपाल, आश्विन २१, २०७३
दीप जतिबेला संगीततर्फ आकर्षित भएका थिए त्यतिबेला उनी नारी स्वरमा गाउँथे । झण्डै १५ वर्षको उमेर पार नगर्दासम्म उनी त्यही अवस्थामा रहे । त्यसपछि मात्र उनको वास्तविक स्वर खुल्यो । समयको त्यो विन्दुदेखि नै उनले निरन्तर गाउँदै आएका छन, ‘म पत्थरको देवता होइन...’ उनको पहिलो गीत नै सदावहार छ ।पुरा पढ्नुहोस्